Tony Blair sy Balkenende kabinetra dia manapotika ny fandripahana foko Irak Martin Vrijland
Home » ankapobeny » Tony Blair sy Balkenende kabinetra dia manapotika ny fandripahana foko Irak
Navoaka tamin'ny Jul 7, 2016 ao ankapobeny, famonoana Ny Mpiray Tanindrazana | Mivoaka ny tsetsatsetsa ho an'i Tony Blair sy Kabinetra Balkenende, dia manapotika ny famonoana olona Irak
Karazana karazana Tony Blair, dia ampiharina amin'ny politika henjana avy eo: Tsy maintsy niala i Saddam Hussein, nanomboka tamin'ny adihevitra diso ny ady tany Irak. Tsy nisy ny fandringanana maro an'isa. Tony Blair dia mpandainga sy mpamono olona! Saingy tahaka ny mpangalatra dia hilaza foana fa tsy hangalatra intsony mihitsy izy, ny mpanao politika dia hanohy hanaparitaka ny laingany foana. Ary azo atao izany, satria mihevitra ny olona fa tsara izany. Afaka mamono fotsiny olona an-tapitrisany fotsiny ianao raha tsy misy antony tokony hananana. Satria izany no resentsika. Araka ny isa ofisialy, dia izy io fa 500.000, ka tsy mora izany, sa tsy izany? Ary io ady io dia tao amin'ny 2003. Koa raha zatovo ianao tamin'izany fotoana izany, dia tsy nanahy momba izany mihitsy ianao. Ary ireo zatovo ireo ihany no mifidy ny mpanao politika amin'izao fotoana izao. Ary araka ny fantatsika, izany dia ny famoronana smartphone izay manana ny fahitana ny fisainana mialoha. Raha fehezina, tsy mahaliana azy ireo izany, ny iray, iray monja tsy misy dikany. "Tony Blair, iza moa izany? WTF manao izany amiko!"
Tony tsara i Tony Blair noho ireo mpanao politika Holandey. Ny haino aman-jery holandeana dia mivoaka amin'ity mpilalao anglisy ity, fa ny fanendrena azy Jaap de Hoop Scheffer amin'ny maha-sekretera jeneralin'ny OTAN, dia nahantona ihany koa ny fanohanan'ny Holandey ny ady tany Iraka. Raha fintinina, ny mpikambana rehetra baranjely Balkenende I Tokony hikatona ny iray amin'ny sehatra iray ao Scheveningen Tribunal Irak ao anatin'izany.